C/rashiid Xiddig oo Kismaayo ka jeediyay khudbad dhiigga ku kicisay Axmed Madoobe (Daawo) - Latest News Updates
C/rashiid Xiddig oo Kismaayo ka jeediyay khudbad dhiigga ku kicisay Axmed Madoobe (Daawo)
Xildhibaan C/rashiid Maxamed Xiddig oo ka mid ah mudanayaasha Golaha Baarlamaanka Federaalka oo ku sugan magaalada Kismaayo ayaa khudbad xasaasi ah u jeediyay waxgarad iyo odayaasha dhaqanka beelaha degan gobolada Jubbooyinka, wuxuuna si gaar ah uga hadlay xaaladda halka mareyso, gaar ahaan arrimaha siyaasadda iyo loolanka xoogan ee loogu jiro doorashooyinka dhowaan ka dhacaya halkaasi.
“Intiinaan meesha fadhida waa yar tahay qof aan loo hanjabin sidaan filayo” ayuu yiri Cabdirashiid Xiddig oo sheegay in magaalada Kismaayo lagu xiray xubno ka horjeeda siyaasadda Axmed Madoobe.
Xildhibaanka oo ka mid ah musharaxiinta u tartameysa xilka Madaxweynaha maamulka Jubaland ayaa sheegay in Kismaayo maamulka ka arrimiya uu dhibaatooyin kala duwan ku hayo bulshada qeybaheeda kala duwan isla markaana uu xadidayo dhaqdhaqaaqyadooda musharaxiinta iyo siyaasiyiinta ka qeyb qaadanaya doorashooyinka.
Waxa uu sheegay C/rashiid Xiddig in gogosha uu khudbadda ka jeedinayo ay tahay midii 21aad ee waxgaradka iyo odayaasha beelaha kula kulmayaan musharaxiinta, wuxuuna tilmaamay isagu inuusan garaneynin sababta loogu dhibaateynayo gudashada howlahooda.
Khudbadda Xildhibaan C/rashiid Xiddig ka jeediyay magaalada Kismaayo ayaa dhiigga ku kicisay Madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo isagu horay u sheegay in Xamar laga soo abaabulayo qorsheyaal maamulkiisa lagu maja xaabinayo.
Previous articleCilmi baaris lagu sameeyay Qurba Joogta!!!.